Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment साताभर सुनको मूल्य २७ सयले घट्यो - Pnpkhabar.com
साताभर सुनको मूल्य २७ सयले घट्यो
काठमाडौं, मंसिर १३ : सुनको मूल्य साताभरमा दुई हजार ७०० रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार तोलाको ९४ हजारमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य शुक्रबारसम्म तोलामा दुई हजार ७०० ले कमी आइ तोलाको ९१ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै, साताभर चाँदीको भाउमा पनि तोलामा ४५ रुपैयाँले कमी आएको छ । आइतबार तोलाको १२ सय १० मा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबारसम्म आइपुग्दा ११ सय ६५ रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको थियोे । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यस साता सुनको मुल्य प्रतिऔन्स ९० डलरले घटेको छ ।
गत शुक्रबार प्रतिऔन्स १८ सय ७८ डलरमा कारोबार भएको सुनको मूल्य गएको शुक्रबारसम्म ९० डलरले कमी आइ १७ सय ८८ डलर हाराहारीमा कारोबार भएको छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोपको सकारात्मक समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मुल्य घट्दा स्थानीय बजारमा पनि सुनको मूल्यमा कमी आएको महासंघले जनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको निवार्चनले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभावका कारण पनि सुनको मूल्य अझै घट्नसक्ने महासंघले जनाएको छ ।
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई भरतपुर महानगरले दियो चार करोड
आज सुनचाँदीकै मूल्य घट्यो, कारोबार कतिमा ?
नेप्सेमा करेक्सन, सवा ८ अर्ब माथी कारोबार
नेप्से झण्डै १८ अङ्कले घट्यो
आज सुनको मूल्य बढेसँगै चाँदी घट्यो, कारोबार कतिमा ?
विवाद मिलाउन आयोगलाई सरकारको अवरोध, संशोधनप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट
पशुपति पुग्नासाथ प्रधानमन्त्रीको मन पग्लियो, ठाउँको ठाउँ ३० करोड दिने आदेश
आउँदाे चुनावमा प्रचण्ड–माधव समूहकाे १० सिट पनि आउँदैन, बरफ पग्लिए जसरी सकिन्छन् : ओली
वामदेव गौतमद्वारा ‘पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान’ घोषणा कार्यक्रम
चार पूर्वप्रधान्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता
दक्षिण कोरियामा पहिलोपटक बिरालोमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
अबको तीन महिनाभित्र सबै नेपालीले निःशुल्क खोप पाउँछन् : प्रधानमन्त्री ओली
कोठा भाडामा लिन र दिन सजिलो मोबाइल एप ‘रेन्टास्टिक’ सार्वजनिक
भ्रष्टाचारको अभियोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री प’क्राउ
काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा २९३ जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए
थप २८३ जनामा संक्रमण पुष्टि, निको हुनेको संख्या २ लाख ६५ हजार ५९ पुग्यो
नेपालकै पहिलो घटना, क्याल्सियम भरिएको मुटुको नशाको बिनाशल्यक्रिया उपचार सफल
सरकारद्वारा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१’ खारेज